Ny fitantanana ny fako ara-pahasalamana dia ahiana hatramin'ny sivilizasiona voalohany nipetraka. Raha ara-tantara dia natsipy tany amin'ny lalan-drano akaiky indrindra ny rano maloto, nanararaotra ny fanalefahana sy ny fanosorana ho fitsaboana. Io hevitra "fanadiovan-tena" io dia tsy diso; loto maro no azo esorina amin'ny alàlan'ny fizotran'ny natiora miaraka amin'ny fiparitahana, fotoana ary fanalefahana ampy. Na izany aza, ny fitomboan'ny isam-batan'olona, ​​ary ny fitomboan'ny loto amin'ny rano maloto, dia nahatonga an'ity fomba ity tsy ampy. Ny fahitana ireo aretina nateraky ny rano dia niafara tamin'ny fivoaran'ny fanadiovana ary tanjona ny hanasarahana ny rano maloto amin'ny rano fisotro hiarovana ny fahasalaman'ny olombelona. ref Rafitra fitsaboana maro no namboarina mba hampihenana ny fako olombelona tsy hiditra amin'ny ranomasina. Ity ambany ity dia fampidirana ireo rafitra fitsaboana rano maloto mahazatra ampiasaina ankehitriny.
Ny faritra be mponina sy ny tanàna misy indostrialy dia miankina indrindra amin'ny orinasa fanodinana rano maloto (WWTP) afovoany handray sy hikarakarana ny maloto. Ny tambajotram-pantsakan'ny tatatra ambanin'ny tany ambanin'ny tany dia mitondra maloto avy amin'ny trano sy tranobe mankany amin'ny WWTP amin'ny alàlan'ny hery misintona sy paompy. Ireto fotodrafitrasa lehibe ireto dia lafo hanamboarana, hitantanana ary hikolokoloana. Teknolojia sy fahaiza-manao fitsaboana amin'ireo rafitra ireo dia mahalana no nohavaozina aorian'ny fampiasam-bola voalohany ary matetika dia tsy manana fahaizana mitazona tsara ny asany. Marina koa izany ho an'ny fantsom-pako, izay iharan'ny fivoahan'ny rano sy ny tondra-drano matetika. Lafo ny fametrahana fotodrafitrasa fantsom-pako, indrindra ny ivelan'ny tanàn-dehibe be mponina. Eo ihany koa ny fitomboan'ny risika amin'ny tsy fetezana ateraky ny fitomboan'ny rotsakorana, ny fiakaran'ny rano, ny haavon'ny ranomasina. Ankoatry ny vidin'ny asa fanamboarana voalohany, ny fikojakojana ary ny fanavaozana ireo fotodrafitrasa marobe ireo dia lafo, ary mazàna andraikitra amin'ny tanàna na governemanta eo an-toerana.
Ny tanàn-dehibe dia tsy mamoaka rano maloto fotsiny, fa tafio-drivotra ary koa (atambatra dia heverina ho rano maloto izy ireo). Any amin'ny faritra tsy misy hisakana ny fiasan'ireny ary ny fitazonana ny tany, tanety, ala ary zavatra hafa voajanahary atolotra, tsy misy aleha ny rotsakorana, noho izany dia mikoriana amin'ny faritra tsy voaroaka izy, manangona potipoti-javatra sy loto, ka miteraka fandosiran'ny tanàna maloto. Ho valin'izany, tanàna maro no nanamboatra tatatra manangona mba hanangonana sy hitaterana rano anaty tafio-drivotra mankany amin'ireo toeram-pitsaboana rano maloto toy ny maloto. Na dia toa mahomby aza izany dia mampitombo ny faharefoana amin'ny singa rehetra ao amin'ilay rafitra. Matetika ny tafio-drivotra ary na dia ny orana maivana aza dia mihoatra ny fahafahan'ny fantsona, mitazona tanky ary rafi-pitsaboana, izay miteraka fandroahana rano maloto tsy voatsabo, ao anatin'izany ny loto maloto, mankany anaty lalan-drano. Any Etazonia, olona 40 tapitrisa no tompoin'ny tatatra mitambatra, izay mandoaka rano maloto mihoatra ny 3 tapitrisa tapitrisa isan-taona amin'ny rano maloto miaraka amin'ny rano mikitroka (CSO). ref
Jereo ny Webinar Wastewater 101 raha mila fanazavana fanampiny momba ny fitantanana rano maloto:
Kilonga, na ara-batana, ny fitsaboana dia manomboka amin'ny fisavana: ny maloto dia ampandalovina amin'ny efijery mba hanesorana ny moka lehibe. Manan-kery dia entina amin'ny famahana ny fiara mifono vy, izay manampy ny gravitant amin'ny fametahana ireo vazo mihidy fanampiny.
Ny fitsaboana ambaratonga voalohany sy faharoa dia takiana amin'ny firenena sasany ary mitombo ny isan'ny fotodrafitrasa fampidirana tertiary. ref Na izany aza, na dia ilaina aza ny fitsaboana dia fahita matetika ny tsy fahombiazana ary tsy tokony horaisina fa ny lalàna napetraka dia manondro fitsaboana sahaza. Ho fanampin'izany, ny fetra amin'ny fatran'ny otrikaina ao amin'ny effluent dia ampiharina amin'ny ambaratongam-pokontany sy toerana hanatanterahana ny famahana ny otrikaina sy ny vokatr'izany eutrophication. Manampy ny mason-tsivana fitsaboana, saingy tsy ampy hiarovana ny tontolo iainana an-dranomasina amin'ny fandotoana.
Ny rafi-pitsaboana rano maloto eto an-toerana (fantatra ihany koa amin'ny fanadiovana tsy voaroaka) dia rafitra misy eo an-toerana sy bitika hitantanana ny fako olombelona izay tsy mendrika na tsy namboarina ny rafitra afovoany. Ny hydrôlôjika, ny jeôlôjika ary ny jeografia (ary koa ny ara-bola, ny politika ary ny fitsipika) dia afaka manondro raha azo atao ny manala tatatra sy ny rafitra afovoany na raha toa ka mety kokoa ny rafi-pitsaboana rano maloto (OWTS). Ireo faritra misy fonenana miparitaka, tany marivo, vatokely tsy azo tohizina, na latabatra rano marefo dia matetika omen'ny OWTS. Ireo rafitra ireo dia mety ho lafo amin'ny tompon-trano tsirairay, kanefa amin'ny toerana sasany, ny vidin'ny fametrahana sy ny fikojakojana dia azo ahena amin'ny alàlan'ny fanampiana na famporisihana eo an-toerana.
Ny fikorianan'ny rano maloto amin'ny alàlan'ny rafitra septika mahazatra eo an-toerana. Loharano: Office of Water EPA 2002
Cesspools, izay iray monja amin'ny dingana fitehirizana sy fitsaboana. Eto, ny lavaka nohadina na namboarina dia manangona effluent ho an'ny fametrahana voajanahary sy ny fitsaboana. Ireo lavaka dia mety nilahatra na tsy nikirakira tamina sakana izay manome fisarahana kely dia kely amin'ny tany sy ny rano ambanin'ny tany. Ny cesspools dia aseho fa tsy mandaitra, manome fitsaboana tsy ampy, ary esorina amin'ny toerany, soloina, ary omena toerana mihitsy aza.
Rafitra septika mazàna dia misy fitoeran-drano mitazona rano maloto sy fomba fanaparitahana hanomezana fitsaboana fanampiny ho an'ny effluent rehefa mivoaka. Ary koa ny fisamborana ny fakon-tany, ny tanky dia mampiroborobo ny fametrahana sy anaerobic fitsaboana. Fanampiny aerobics Ny efi-tranon'ny tanky dia nanjary mahazatra kokoa hanamafisana ny fitsaboana biolojika sy ny fanesorana ny otrikaina, ary ny rafitra septika sasany aza misy paompy mihodina indray hifindra monina eo anelanelan'ny tontolo aerobika sy anaerobika. Ny fanaparitahana dia zava-dehibe amin'ny fampihenana ny fikorianan'ny effluent mankany amin'ny tontolo iainana.
Sakan-drano dia teknika fanaparitahana izay mampiroborobo ny fahafaha-manasitrana effluent ataon'ireo zavamiaina bitika ao anaty tany, vatokely na fitaovana hafa alohan'ny fivoahana ao anaty rano na ambonin'ny rano.
Ny horonantsary etsy ambany avy amin'ny The Nature Conservancy Long Island dia manome fanazavana amin'ny antsipiriany kokoa momba ny rafitra septic sy cesspool.
Safidy iray hafa momba ny rafitra fitsaboana ny rano maloto eto an-toerana (OWTS) ny rafitra mifototra amin'ny kaontenera, izay manangona sy mitahiry rano maloto ihany koa eo an-toerana, avy eo mitaky fako hoentina any an-toeran-kafa hanaovana fitsaboana. Ireo rafitra ireo dia hita any amin'ny faritra tsy dia misy fotodrafitrasa voafetra ary ao koa ireo lavarangana any anaty lavaka, izay mila tsy ho ritra intsony rehefa feno, ary trano fidiovana misy siny, izay rarahana isan'andro. Ny fitsaboana ny fako voaangona avy amin'ny safidy mifototra amin'ny fitoeram-bokatra dia manomboka amin'ny fizotran'ny fitsaboana mahazatra voalaza etsy ambony, ka hatramin'ny fomba fanao amin'ny famerenana loharano vaovao, tsy misy fitsaboana mihitsy. Safidy mifototra amin'ny kaontenera mahomby dia faritana amin'ny antsipiriany bebe kokoa ao Vahaolana mipoitra.
Ny rafitra septika sy cesspools dia tsy natao hamahana ny otrikaina ary tsy ampy amin'ny fanesorana azy ireo tsy hivoaka amin'ny rano ary mety hitera-doza ho an'ny tontolo an-dranomasina any amin'ny faritra amorontsiraka. Na dia betsaka aza ny fandrosoana teknolojia hiatrehana ny fanesorana otrikaina ao amin'ny OWTS, dia misy ny tsy fahampian'ny lalàna mifehy ny otrikaina amin'ny rano maloto manerantany. Ny famoahana bantsilana sy ny tsy fetezana dia miteraka fahalotoana tsy misy fotony izay sarotra ny mamantatra ary tsy misy vokany amin'ny tsy fanarahan-dalàna, mamela fotoana kely ho an'ny fampiharana. Ny fampiroboroboana ny rafitra OWTS mba hanampiana ny fihenan'ny otrikaina dia manaporofo fahombiazan'ny vidiny bebe kokoa noho ny fananganana toeram-pitsaboana rano maloto vaovao.
Ny fotodrafitrasa fanadiovana dia teren'ny topografikan'ny faritra iray. Ny faritra mitsingevana, ny tondra-drano, ny tany tsy mety simba ary ny faritra amorontsiraka dia mety hanasarotra ny fametrahana rafitra maro. Jereo ny fandinihana tranga avy any amin'ny Farihy Tonle Sap, Kambodza ary Farihy Indawgyi, Myanmar mamaritra ny fampandrosoana sy ny fampiharana ny Handypods avy amin'ny Wetlands Work.
Ny fitsaboana itsinjaram-pahefana dia natao manokana, miasa amin'ny mizana kely kokoa ary manome karazan'olona marobe
Aorian'ny fitsaboana avy amin'ireo rafitra afovoany na itsinjaram-pahefana, dia alefa mivantana amin'ireo rano manodidina azy na ao anaty tany ny effluent voatsabo. Fantsona hialana dia ampiasaina handrotsahana rano mivantana any anaty renirano sy ranomasina, fa ny tanimbary, ny tany, ny honahona ary ny zavamaniry kosa dia mihena tsikelikely ao anaty rano ambanin'ny tany. Ny fandotoana ny ranomasina ateraky ny rano maloto amin'ny rano maloto dia miankina amin'ny ambaratongan'ny fitsaboana voaray alohan'ny famoahana sy ny paikady famoahana ampiasaina. Ny teknikan'ny fampihenana ny otrikaina avo lenta sy ny vahaolana voajanahary dia afaka mahatratra fitsaboana fanampiny ary mampiadana ny fikorianan'ny effluent. ny fanadihadiana tranga avy any Santiago any amin'ny Repoblika Dominikanina mampiseho fahombiazana lehibe amin'ny fampiasana tany lemaka namboarina mba hampihenana ireo loto voaloton'ny organika natsipy tany amin'ny rano.
Etsy ankilany, ny fanariana maloto tsy voadio dia manome loza mitombo ho an'ny fahasalaman'ny olombelona, ​​ny zavamananaina ary ny tontolo iainana. Raha matetika ny zavamaniry mpitsabo marobe any amin'ny morontsiraka dia mamoaka tsiranoka na effluent manta mivantana any an-dranomasina, dia misy koa ny fandotoana ny maloto avy amin'ny rafitra fitehirizana kely kokoa, amin'ny alàlan'ny famoahana ny rano ambanin'ny tany sy ny fametahana rano, izay matetika no tsy voamarika. Jereo ny fanadihadiana tranga avy any Dar es Salaam, Tanzania, Afrika Atsinanana hiadiana amin'ny olana momba ny atin'ny lavadavaka any an-davaka izay nariana tany amin'ny tontolo iainana.
Ny fotodrafitrasa, ny enti-manana, ny jeolojia, ny haben'ny mponina, ny fari-piainana ara-tsosialy sy ara-kolontsaina ary ny politika dia misy fiantraikany amin'ny fisafidianana ny rafi-pitsaboana rano maloto. Ity fifantenana ity dia voafaritra tsara amin'ny toerana misy azy, ary ny rafi-pitantanana afovoany dia mety tsy dia mandaitra amin'ny fandaniana avo kokoa amin'ny toerana maro. Ohatra, ny WWTP dia mety any amin'ny faritra misy firafitra be sy be mponina, tambajotra misy fantsona (na loharanon-karena ary jeolojika sahaza hametrahana azy ireo amin'ny fomba mahomby), ary fahaizana mitandrina ara-teknika. Raha tsy izany, ny OWTS dia mety kokoa raha tsy misy ny tatatra fantsona fantsona ary misy elanelana bebe kokoa eo amin'ny loharanon'ny rano maloto (trano, orinasa, sns.). Ny fotodrafitrasa fanarian-drano efa misy dia misy fiantraikany amin'ny fahaizan'ny rafitra, satria ny fanavaozana dia matetika no mora kokoa ary mandany vola be kokoa hampiharina noho ny fampandrosoana fotodrafitrasa vaovao. Jereo ireo fandinihana tranga momba ny asa hametrahana ivon-toerana fitsaboana rano maloto eto amin'ny nosy Rotan, Honduras ary Bonaire.
Ny fitaovana fanampiana ny fanapaha-kevitra amin'ny fisafidianana ny rafitra tsara indrindra mifototra amin'ny toe-javatra eo an-toerana dia tsy ampy, ka manasarotra ny fitantanana ampy ny loto amin'ny rano maloto sy ny filokana fanadiovana. Ny fiheverana ny fisafidianana ny rafitra dia tokony hahitana fotodrafitrasa misy, loharanom-pahalalana, andrasana ara-tsosialy sy ara-kolontsaina, fanohanana ara-politika na faneriterena, ny jeolojia eo an-toerana sy ny hydrôlôjika, ary ireo antony maro hafa. Tsidiho ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFitaovana fitantanana fahadiovana sy fitantanana rano maharitra hianarana bebe kokoa momba ny rafitra sy teknolojia fanadiovana.